श्रीमतीलाइ घर बाट निकाल्न खोज्दा…. – Gazabkonews
पतिले पत्निलाई आँफुलाई भन्दा बढी माया गर्छन् । तर कतिपय श्रीमानले पत्निको मर्म बुझेका हुँदैनन् । आज हामीले आफ्नी पत्निलाई माया नगर्ने पतिको कथा भिडियोमा देखाउन गइरहेका छौँ । हेर्नुहोस् भिडियो
प्राइम कमर्शियलको नाफासँगै बढ्यो ईपीएस, वितरणयोग्य मुनाफा साढे २ अर्बभन्दा बढी : प्राइम कमर्शियल बैंक लिमिटेड (PCBL) ले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विवरण अनुसार बैंकको खुद नाफा र प्रतिशेयर आम्दानी अर्थात ईपीएस दुबै बढेको छ भने वितरणयोग्य मुनाफा साढे २ अर्ब नाघेको छ।
असार मसान्तसम्ममा बैंकले ३ अर्ब २५ करोड ४७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४४.५६ प्रतिशत बढी हो। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै खुद नाफा बढ्न पुगेको हो। यसले निजी क्षेत्रलाई दोस्रो बजारमा जान अङ्कुश लाएको देखिन्छ। जुन केन्द्रीय बैंकले गलत गरेको मेरो ठहर छ” सिएनआइका पूर्व अध्यक्ष सतिश मोरले मेरो लगानीसँग भने।
समीक्षा अवधिमा बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २८.२६ प्रतिशत बढेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी ५६.३२ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकको सञ्चालन मुनाफा ४३.७७ प्रतिशत बढेको छ। बैंकको इम्पेरमेन्ट चार्ज समीक्षा अवधिमा ७६ करोड ६२ लाख रुपैयाँबाट बढेर ७७ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
सो अवधिसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ।खुद नाफासँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि बढेको छ। समीक्षा अवधिमा बैंकको यस्तो आम्दानी ४ रुपैयाँ १४ पैसा बढेर २० रुपैयाँ २४ पैसा पुगेको छ। सो अवधिसम्ममा बैंकको मूल्य आम्दानी अनुपात २३.६७ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १४८ रुपैयाँ ७६ पैसा रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत बोनसशेयर वितरण गरी चुक्ता पूँजी बढाएको बैंकको जगेडा कोष समीक्षा अवधिमा ९.१३ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, बैंकको निक्षेप २९.०६ प्रतिशत र कर्जा २२.५९ प्रतिशत बढेको छ। एक व्यक्तिले अधिकतम १२ करोड मात्रै शेयर कर्जा पाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्र असन्तुष्ट
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले एक व्यक्तिले १२ करोड रुपैयाँ सम्मको मात्रै शेयर कर्जा पाउने गरी नयाँ व्यवस्था गरेपछि निजी क्षेत्र असन्तुष्ट देखिएको छ। केन्द्रीय बैंकको उक्त नीतिले निजी क्षेत्रलाई दोस्रो बजारमा जान अप्रत्यक्ष रुपमा अङ्कुश लगाएको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ। “जसरी मौद्रिक नीतिले शेयर कर्जा १२ करोड रुपैयाँ मात्रै पाउने व्यवस्था गर्‍यो यो निजी क्षेत्र मैत्री छैन।
मोरका अनुसार यस्तो नीति ल्याउने यो सही समय थिएन। कुनै व्यवसायीले दोस्रो बजारमा अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न चाहन्छ भने किन बन्देज लगाउनु ? फेरि यतिबेला भर्खरै नेपालको पूँजी बजारमा बिस्तारै निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता बढ्दै जाँदा कारोबार रकम समेत बढ्दै गएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा एकाएक यस्तो व्यवस्था गर्नु निजी क्षेत्र मैत्री देखिएन।अर्कोतर्फ निजी क्षेत्र अहिले दोस्रो बजारमा आफ्ना कम्पनी सूचिकृत गराउने भनिरहेका छन्। याे व्यवस्थाले पक्कै पनि कम्पनीहरू दोस्रो बजारमा आउन प्रोत्साहित हुने छैनन्। यसले आउने दिनमा शेयर बजारमा समस्या ल्याउने मोरको तर्क छ।